Izindlela Zokudala - I-Airbnb
Centre, Alabama, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lore’
U-Lore’ Ungumbungazi ovelele
Le ndlu yokugezela engu-2/1 yokugezela iyindawo encane etholakala kuMain Street eCentre. Itholakala eduze ne-Weiss Lake, Terrapin Creek, Little River National Park, Pirates Bay Water Park kanye neCherokee Rock Village (Little Rock City) eyaziwa ngokuqwala amatshe. Umndeni wakho uzoba seduze nezindawo zokudlela nezitolo zasendaweni.
Indlu yonke yokulala engu-2/1 yokugezela enegceke elingemuva elinomgodi womlilo.
Imibhede emikhulu engu-2, 1 umbhede wosofa
4.76 · 55 okushiwo abanye
Isikhungo siseduze ne-Weiss Lake enhle, iTerrapin Creek kanye ne-Little River National Park. Kunamathuba amaningi okujabulela ukuphuma ngaphandle ngokuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili, noma ukuhamba ngesikebhe. I-Piedmont, esendaweni engamakhilomitha angu-17, ihlanganisa umzila wamabhayisikili weChief Ladiga Trail kanye nepaki ye-Indian Mountain ATV kanye nendlela yokuhamba izintaba yasePinhoiti.
Uzoba nobumfihlo obuphelele kodwa siphila phakathi nemizuzu eyishumi ngakho siyatholakala ukuze sihlangabezane nezidingo zakho. Singatholakala njalo ngocingo noma ngombhalo ukuze siphendule imibuzo.
ULore’ Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Centre namaphethelo